Obesity and Infertility – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
အဝလှနျခွငျး နှငျ့ မြိုးပှားမှုဆိုငျရာ ပွသနာ
“မိမိ ခန်ဓာကိုယျ အလေးခြိနျ အလှနျအမငျးတကျလာတာ၊ ‘ ဝ ‘လာတာကို နှဈသကျရဲ့လား၊ သဘောကရြဲ့လား ” လို့ မေးလိုကျရငျ လူတျောတျောမြားမြားက မနှဈသကျဖူးလို့ ဖွကွေမှာပါ…. ဘာလို့လဲ ?…. ဝ လာတဲ့အခါမှာ… မိမိစားခငျြတာ မစားရတော့လို့၊သှားလာလှုပျရှားရတာ မလှယျကူလို့၊ ခြှေးထှကျလို့ ၊ သူမြားတှကေ ကဲ့ရဲ့လို့ အစရှိသဖွငျ့ ဖွကွေမှာပါ…
ဒါထကျ အရေးကွီးတဲ့ အခကျြတှကေတော့.. လူတဈယောကျဟာ မိမိမှာ ရှိသငျ့တဲ့ ခန်ဓာကိုယျအလေးခြိနျ(Body mass index)ထကျ မြားလာတဲ့အခါမှာ … နှလုံးရောဂါ၊ သှေးခြိုဆီးခြိုရောဂါ၊ အဆဈအမွဈကိုကျခွငျး၊ မြိုးပှားမှုနဲ့ ဆိုငျတဲ့ ပွသနာ တှကေို ပိုရငျဆိုငျရတတျလို့ပါ… ဒီထဲကမှ အဝလှနျခွငျးနဲ့ မြိုးပှားမှုဆိုငျရာ ပွသနာ အကွောငျးကို ပွောပွခငျြပါတယျ..
– အမြိုးသမီးတဈယောကျဟာ မိမိမှာ ရှိသငျ့တဲ့ BMI ထကျ ကြျောလှနျလာခဲ့ရငျ ခန်ဓာကိုယျတှငျး ဟျောမုနျးပွောငျးလဲ မှုတှေ ဖွဈလာမယျ… ဒီပွောငျးလဲမှုကွောငျ့ ကိုယျဝနျရနိုငျတဲ့ အခှငျ့အလမျးလြော့ကသြှားနိုငျပါတယျ..
– အငျဆူလငျ(insulin)ထိုးနရေသော ဆီးခြိုရောဂါ ရှိတဲ့သူတှမှော အဝလှနျခွငျးကွောငျ့ insulin ကို ခုခံနိုငျစှမျးရှိလာပါတယျ..ဒါ့ပွငျ ရာသီသှေးဆငျးတာ ပုံမမှနျ ဖွဈနိုငျပွီး မြိုးပှားမှုကို ထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ.. insulin ကို ခုခံနိုငျလာတဲ့အတှကျ မြိုးဥမကွှနေိုငျခွငျးကွောငျ့ အမြိုးသမီးနဲ့ ဆိုငျသော မီးယပျရောဂါမြား ပိုမိုခံစားရနိုငျပါတယျ…
– အဝလှနျနတေဲ့အမြိုးသမီးဟာ ကိုယျဝနျလှယျဖို့ ကွိုးစားနပေါက ခကျခဲတာမြိုး.. ကိုယျဝနျလှယျပွီး နှောငျးပိုငျးမှာ သားပကျြသားလြှောတာမြိုး ကွုံတှရေ့နိုငျပါတယျ… ဒီလို ဖွဈရခွငျးဟာ …ပွောခဲ့သလို ဟျောမုနျးပွောငျးလဲမှုကွောငျ့ (သို့) မြိုးဥ ပုံမမှနျခွငျးကွောငျ့မို့ ဖွဈနိုငျပါတယျ…
– အိမျထောငျဖကျ အမြိုးသားဟာ အဝလှနျနပေါကလညျး အမြိုးသမီးမှာ ကိုယျဝနျရနိုငျဖို့ကို အဟနျ့အတား ဖွဈစပေါတယျ.. အမြိုးသားရဲ့တကျစရိုစတီရုနျး(testosterone) ဟျောမုနျးကတြဲ့အခါမှာ မြိုးပှားမှုကို ထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ.. ဒါပွငျ လိငျအင်ျဂါမထောငျမတျနိုငျခွငျး (erectile dysfunction) ကိုလညျး ဖွဈစနေိုငျပါတယျ …
– အဝလှနျခွငျးဟာ ကနျြးမာရေးနှငျ့ မြိုးပှားမှုကို ထိခိုကျစတေဲ့အတှကျ… မိမိမှာ ရှိသငျ့သော ခန်ဓာကိုယျအလေးခြိနျ(BMI)ကို အမွဲ ဂရစိုကျရပါမယျ.. မိမိဟာ အဝလှနျနပေါက … လကေ့ငျြ့ခနျးပုံမှနျ လုပျခွငျး၊ ကိုယျအလေးခြိနျလြော့စသေော diet plan မြား၊ ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျသော အစားအစာမြား ကို စားသောကျခွငျး ၊ တရာဝနျနဲ့ တိုငျပငျပွီး သငျ့လြျောသော ဆေးကုသမှု ခံယူခွငျး အစရှိတာတှေ ပွုလုပျသငျ့ပါတယျ… ဒီလိုအားဖွငျ့ သငျ့တငျ့သော ခန်ဓာကိုယျကို ရရှိနိုငျပွီး အဝလှနျခွငျးကွောငျ့ ကွုံတှရေ့နိုငျသော ကနျြးမာရေး ပွသနာမြားကို ဖွရှေငျးနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ….
ကနျြးမာပြျောရှငျသော အိမျထောငျမှု ဘဝကို ပိုငျဆိုငျကွပါစလေို့ တောငျးဆုမတ်ေတာပွုလကျြ….
အဝလွန်​ခြင်း​ နှင့်​ မျိုးပွားမှုဆိုင်​ရာ ပြသနာ
“မိမိ ခန္ဓာကိုယ်​ အ​လေးချိန်​ အလွန်​အမင်းတက်​လာတာ၊ ‘ ဝ ‘လာတာကို နှစ်​သက်​ရဲ့လား၊ သ​ဘောကျရဲ့လား ” လို့ ​မေးလိုက်​ရင်​ လူ​တော်​​တော်​များများက မနှစ်​သက်​ဖူးလို့ ​ဖြေကြမှာပါ…. ဘာလို့လဲ ?…. ဝ လာတဲ့အခါမှာ… မိမိစားချင်​တာ မစားရ​တော့လို့၊သွားလာလှုပ်​ရှားရတာ မလွယ်​ကူလို့၊ ​ချွေးထွက်​လို့ ၊ သူများ​တွေက ကဲ့ရဲ့လို့ အစရှိသဖြင့်​ ​ဖြေကြမှာပါ…
ဒါထက်​ အ​ရေးကြီးတဲ့ အချက်​​တွေက​တော့.. လူတစ်​​ယောက်​ဟာ မိမိမှာ ရှိသင့်​တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်​အ​လေးချိန်​(Body mass index)ထက်​ များလာတဲ့အခါမှာ … နှလုံး​ရောဂါ၊ ​​သွေးချိုဆီးချို​ရောဂါ၊ အဆစ်​အမြစ်​ကိုက်​ခြင်း၊ မျိုးပွားမှုနဲ့ ဆိုင်​တဲ့ ပြသနာ ​တွေကို ပိုရင်​ဆိုင်​ရတတ်​လို့ပါ… ဒီထဲကမှ ​အဝလွန်​ခြင်းနဲ့ မျိုးပွားမှုဆိုင်​ရာ ပြသနာ အ​ကြောင်းကို ​ပြောပြချင်​ပါတယ်​..
– အမျိုးသမီးတစ်​​ယောက်​ဟာ မိမိမှာ ရှိသင့်​တဲ့ BMI ထက်​ ​ကျော်​လွန်​လာခဲ့ရင်​ ခန္ဓာကိုယ်​တွင်း ​ဟော်​မုန်း​ပြောင်းလဲ မှု​တွေ ဖြစ်​လာမယ်​… ဒီ​ပြောင်းလဲမှု​ကြောင့်​ ကိုယ်​ဝန်​​ရနိုင်​တဲ့ အခွင့်​အလမ်း​လျော့ကျသွားနိုင်​ပါတယ်​..
– အင်​ဆူလင်​(insulin)ထိုး​နေရ​သော ဆီးချို​​ရောဂါ ရှိတဲ့သူ​တွေမှာ အဝလွန်​ခြင်း​ကြောင့်​ insulin ကို ခုခံနိုင်​စွမ်းရှိလာပါတယ်​..ဒါ့ပြင်​ ရာသီ​သွေးဆင်းတာ ပုံမမှန်​ ဖြစ်​နိုင်​ပြီး မျိုးပွားမှုကို ထိခိုက်​​စေနိုင်​ပါတယ်​.. insulin ကို ခုခံနိုင်​လာတဲ့အတွက်​ မျိုးဥ​မ​ကြွေနိုင်​ခြင်း​ကြောင့်​ အမျိုးသမီးနဲ့ ဆိုင်​​သော ​မီးယပ်​ရောဂါများ ပိုမိုခံစားရနိုင်​ပါတယ်​…
– အဝလွန်​​နေတဲ့အမျိုးသမီးဟာ ကိုယ်​ဝန်​လွယ်​ဖို့ ကြိုးစား​နေပါက ခက်​ခဲတာမျိုး.. ကိုယ်​ဝန်​လွယ်​ပြီး ​နှောင်းပိုင်းမှာ သားပျက်​သား​လျှောတာမျိုး ကြုံ​တွေ့ရနိုင်​ပါတယ်​… ဒီလို ဖြစ်​ရခြင်းဟာ …​ပြောခဲ့သလို ​ဟော်​မုန်း​ပြောင်းလဲမှု​ကြောင့်​ (သို့) မျိုးဥ ပုံမမှန်​ခြင်း​ကြောင့်​မို့ ဖြစ်​နိုင်​ပါတယ်​…
– အိမ်​​ထောင်​ဖက်​ အမျိုးသားဟာ အဝလွန်​​နေပါကလည်း အမျိုးသမီးမှာ ကိုယ်​ဝန်​ရနိုင်​ဖို့ကို အဟန့်​အတား ဖြစ်​​စေပါတယ်​.. အမျိုးသားရဲ့တက်​စရိုစတီရုန်း(testosterone) ​ဟော်​မုန်းကျတဲ့အခါမှာ မျိုးပွားမှုကို ​ထိခိုက်​​စေနိုင်​ပါတယ်​.. ဒါပြင်​ လိင်​အင်္ဂါမ​ထောင်​မတ်​နိုင်​ခြင်း (erectile dysfunction) ကိုလည်း ဖြစ်​​စေနိုင်​ပါတယ်​ …
– အဝလွန်​ခြင်း​ဟာ ကျန်းမာ​ရေးနှင့်​ မျိုးပွားမှုကို ထိခိုက်​​စေတဲ့အတွက်​… မိမိမှာ ရှိသင့်​​သော ခန္ဓာကိုယ်​အ​လေးချိန်​(BMI)ကို အမြဲ ဂရစိုက်​ရပါမယ်​.. မိမိဟာ အဝလွန်​​နေပါက … ​လေ့ကျင့်​ခန်းပုံမှန်​ လုပ်​ခြင်း၊ ကိုယ်​အ​လေးချိန်​​လျော့​စေ​သော diet plan များ၊ ကျန်းမာ​ရေးနဲ့ ညီညွတ်​​သော အစားအစာများ ကို ​စား​သောက်​ခြင်း ၊ တရာဝန်​နဲ့ တိုင်​ပင်​ပြီး သင့်​​လျော်​​သော ​ဆေးကုသမှု ခံယူခြင်း အစရှိတာ​တွေ ပြုလုပ်​သင့်​ပါတယ်​… ဒီလိုအားဖြင့်​ သင့်​တင့်​​သော ခန္ဓာကိုယ်​ကို ရရှိနိုင်​ပြီး အဝလွန်​ခြင်း​ကြောင့်​ ကြုံ​တွေ့ရနိုင်​​သော ကျန်းမာ​ရေး ပြသနာများကို ​ဖြေရှင်းနိုင်​မှာ ဖြစ်​ပါတယ်​….
ကျန်းမာ​ပျော်​ရွှင်​​သော အိမ်​​ထောင်​မှု ဘဝကို ပိုင်​ဆိုင်​ကြပါ​စေလို့ ​တောင်းဆု​မေတ္တာပြုလျက်​….
Side effects of Slimming Remedies